စင်္ကာပူမြန်မာသံရုံးအကြောင်း သမ္မတထံ ပေးစာ – open letter | MoeMaKa Burmese News & Media
ဟိန်းထိုက်ဈာန် (ခ) ကျော်ကျော်အောင်
မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်သားများ စုဝေးတတ်သော ပင်နီဆူလား ပလာဇာရှေ့မှ မြင်ကွင်းတခု (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ)
၁. ကျွန်တော်သည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကရောက်ရှိပြီး S Pass ဖြင့် ယခုအချိန် (၁၀.၃.၂၀၁၂) ထိ အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
၂. ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျွန်တော့် ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်းတိုးရန် လိုအပ်သည့် အတွက်၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအထိ… တစ်လကို စင်ကာပူဒေါ်လာ (၈၀) နှုန်းဖြင့်စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ အခွန် ပေးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၃. ထိုသို့အခွန်ပေးဆောင်ရခြင်းမှာ (ကျွန်တော် နားလည်သလောက်) တကယ်တမ်း ဥပဒေအရ ပေးဆောင်စရာ မလိုအပ်သော်လည်း ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်း တိုးရန်အတွက် ပေးဆောင်ခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ပူးတွဲပါဖိုင် ၁ …. ၁၉၉၉ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ နှစ်ထပ်အခွန် မပေးဆောင်ရေး သဘောတူစာချုပ်တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုစဉ်က မြန်မာပြည်ဘက်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးသူမှာဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီး (ဦး) ခင်မောင်သိန်း ဖြစ်ပါသည်။)
၄. ထိုကိစ္စများသည် အရင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရ အုပ်ချုပ်နေစဉ် ဖြစ်သောကြောင့်လုပ်ဆောင်မှု မမှန်ကန်မှန်း သိသော်လည်း မိမိတို့ စင်ကာနိုင်ငံတွင် အလုပ် ဆက်လက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်းတိုးရန် အခွန်ပေးခဲ့ကြရပါသည်။
(ထိုကဲ့သို့ နှစ်ထပ်အခွန် မပေးရေးအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာများ ဥပဒေကြောင်းအရ တောင်းဆိုခဲ့ကြသော်လည်း ထိုစဉ်က မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် မသိကျိုးကျွန်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသတင်းများကို စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ် StraitsTimes ၊ Today သတင်းစာများမှ သတင်းဟောင်းများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
၅. ထိုကဲ့သို့ နှစ်ထပ်အခွန် မပေးဆောင်ရေးကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ အခြားနိုင်ငံများနှင့်လည်း မြန်မာအစိုးရမှ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာအစိုးရဘက်မှ နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများထံမှ အခွန်တောင်းခဲ့ပါသည်။ အခွန်တောင်းပုံမှာလည်းအများသိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတိုင်းအခွန်မပေးလျင် ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်း တိုးမပေးဘူး ဆိုတဲ့နည်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
၆. ယခုလက်ရှိ မြန်မာအစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပြည်ပရောက်သူများ အခွန်ပေးဆောင်ရမှုကို ၁၀%မှ ၂ %သို့ ပထမအဆင့် အနေဖြင့် လျော့ချပေးလိုက်ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လက သတင်းကြေငြာခဲ့ပါသည်။
ထိုမှတဆင့် ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ စတင်၍ အခွန်ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။
(တကယ်တမ်းပြောရရင်မည်ဆိုလျင် လက်ရှိမြန်မာအစိုးရက မိမိတို့ ထုတ်ပြန်ထားသော၊ ချမှတ်ထားသော ဥပဒေကို တိတိကျကျ လိုက်နာမည်ဆိုလျင်၊ အခြားနိုင်ငံများဖြင့်ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်များကို လေးစားလိုက်နာမည်ဆိုလျင်၊ နိုင်ငံသားများကို မိမိနှလုံးဝမ်းကဲ့သို့ သဘောထားမည်ဆိုလျင် အစကတည်းက ကို ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်း တိုးရန်အတွက် အခွန်ပေးဆောင်စရာ မလိုအပ်ပါ။)
၇. သို့သော် ယခုပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ မတိုင်ခင် ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ အထိ ပေးဆောင်နေရပါသည်။ (ဥပမာ… ကျွန်တော်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလအထိ ဆောင်ပြီးသားဖြစ်၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ (၃၁ လစာ)တစ်လကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၈၀ ဖြင့် ၊ ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာမှ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာအထိ (၄ လစာ) တစ်လကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၆ ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။)
ထိုသို့ မပေးဆောင်လျင် ပတ်(စ)ပို့သက်တမ်းတိုးပေးမည် မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင့်ပြချက်မှ လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ကြောင်း သံရုံးမှ လမ်းညွန်စာတွင် ဖတ်ရှုရပါသည်။ ကြိုတင် အခွန်ဆောင်ထားအနေဖြင့်လည်း ဥပဒေသည် နောက်ပြန် သက်ရောက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ပေးအပ်ထားသော ငွေများကို ပြန်လည် ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါဟုလည်း ဖတ်ရှုရပါသည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ နောက်ပိုင်း စာအုပ်သက်တမ်း လာတိုးသူများကို အခွန် ပေးဆောင်ခိုင်းသည်မှာ ဥပဒေကို နောက်ပြန်ရိုက်သည်လားဟု အတွေးပွားစေမိပါသည်။
၈. မည်သို့ပင်ဆိုစေ … ဘယ်လိုမှ ပြောလို့လည်းမရနိုင်တော့ မပေးသင့် မပေးဆောင်ထိုက် မပေးပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်းတိုးရေးအတွက် မြန်မာသံရုံးသို့ အခွန်ပေးဆောင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုမေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်ရန်အတွက် မြန်မာသံရုံးသို့ ဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ပြောရမည်ဆိုလျင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အဆင့်အတန်းသည် သံရုံးတွေကို ဖုန်းဆက်ကြည့်လျင် သိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော် မြန်မာသံရုံးသို့ ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်းတိုးရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ သိလိုစေသောကြောင့် ဖုန်းဆက်ခဲ့သည့် အရေအတွက်မှာ အကြိမ် ၃၀၀ ကျော်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော် ၃ ၄ ၅ ခါလောက်ခေါ်မှ တစ်ခါလောက် ဖုန်းဖြေပါသည်။ ကျွန်တော် ပိုပြောသည်မဟုတ်ပါ။ မယုံလျင် သမ္မကြီးကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည်မှ နေ၍ ခေါ်ကြည့်စေလိုပါသည်။ မြန်မာ မဟုတ်သော နိုင်ငံခြားသူ တစ်ဦးက ဖြေကြားပါသည်။ ကျွန်တော် သိလိုသည်များ မေးမြန်းသောအခါ သူ့တွင် လုံလောက်သော သတင်း အချက်အလက်များ မရှိပါ။ မြန်မာသံရုံးသို့ လာခဲ့ပါဟုသာ ပြောပါသည်။ ကျွန်တော်က တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဦးနှင့်ပြောပါစေ ဆိုသောအခါ သူ ဖုန်းလွဲပေးပါသည်။ သူ ဖုန်းလွဲပေးတိုင်း မည်သည့် တာဝန်ရှိသူကမှ ဖြေကြားခြင်း မရှိပါ။ ထိုအခါ သူပြန်ဖြေတတ်သည်မှာ ထမင်းစားထွက်နေသည်၊ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်မှ ပြန်ခေါ်ပါ၊ ၃ နာရီလောက်ပြန်ခေါ်ပြန်လျင်လည်း တာဝန်ရှိသူများ မအားပါ၊ မနက် ၁၀ နာရီလောက်ခေါ်လျင်လည်း မရောက်သေးပါ သို့မဟုတ် ဖြေကြားခြင်း မရှိပါ ဆိုတာများသာ ကြုံတွေ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ သိချင်တဲ့ သတင်း အချက်အလက်လေး သိရဖို့အတွက် ခွင့်ယူပြီး သံရုံးလာရမယ် ဆိုတာတော့ မဖြစ်စေချင်ပါ။ ထိုသို့ သတင်း အချက်အလက်များကို အော်တိုဖြေစနစ်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ထားလျင် ရပါသည်။
ကျွန်တော် (၈.၃.၂၀၁၂) က ဖုန်းဆက်မေးသောအခါ အဆိုပါ ဖုန်းဖြေသူ အမျိုးသမီးက စာအုပ်သက်တမ်းတိုး (စာအုပ်အသစ်လဲ) အခွန်ဆောင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အချက်များကို ပြောပြပါသည်။ မနက် ၉ နာရီမထိုးခင် တန်းစီပြီး Q နံပါတ်လာယူရန်၊ ပြီးလျင် စသည်ဖြင့် အခွန်တွက် နေ့ခင်းပြန်လာ ပြန်စောင့် အခွန်ပေး ၊ စာအုပ်ယူရန် နောက်ထပ် ရက်ချိန်း အဲဒီကျရင် စာအုပ်အသစ်ယူ။
၉. ကျွန်တော် ၉.၃.၂၀၁၂ မနက် အိပ်ရာထ နောက်ကျနေသောကြောင့် ၉ နာရီမတိုင်ခင်မှီအောင် တက္ကစီငှား၍ သံရုံးသို့သွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် ရောက်သောအခါ လူတော်တော်များများ သံရုံးသို့ ရောက်ရှိနေကြပါသည်။ ကျွန်တော်လည်းတန်းစီနေကြသော အယောက် ၃၀ ကျော်လောက်ရှိ လူတန်းကြီးနောက်တွင် အပြေးအလွားဝင်တန်းစီ လိုက်ပါသည်။ သိပ်မကြာခင် ကျွန်တော်နောက်မှ ရောက်လာသူများလည်း ကျွန်တော့် နောက်တွင်တန်းစီကြပါသည်။ မြန်မာသံရုံးကလည်း ယခင်ကနဲ့ မတူဘဲ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားပါသည်။
ပတ်(စ)ပို့ သက်တမ်း တိုးရန်၊ အခွန်ဆောင်ရန်များ၊ ဗီဇာလျောက်ခြင်းများ..စသည့်လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်ကို သေသေချာချာ ရေးသားထားရှိပါသည်။ ထိုအချက်များကိုလည်း တန်းစီနေသူများတန်းစီနေရင်း ဖတ်ရှုနိုင်စေရန် အယ်စီဒီ ဖန်သားပြင်မှ နေ၍ တစ်ပိုဒ်ချင်းတဖြည်းဖြည်း ပြသလျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း တန်းစီနေရင်း ထိုစာသားများကို ဖတ်ရှုနေမိပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်တဲ့ မနက်တွင် လာ၍ Q နံပါတ် ယူရန်၊ ပြီးရင် ဘာလုပ်…စတဲ့ စာသားတွေအားလုံးကို ဖတ်ပြီးတော့ ..ကျွန်တော် တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးက မိနစ် ၂၀ ကျော်လောက် ကြာသော်လည်း တစ်ယောက်မှ မရွေ့သည်ကို သတိထားမိတော့ပါသည်။
ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင် တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာ သဘောပေါက် လိုက်ပြီး ရှေ့မှနောက်မှ လူများကို မေးကြည့်ပါသည်။. သူတို့လည်း မပြောတတ်ဘူးဟု ဆိုသည်ကြောင့်..ကျွန်တော်ကောင်တာသို့ သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ မေးမြန်းကြည့်မှ ဒီလို Q မပေးတော့ဘူး..။ အွန်လိုင်းကနေပဲ appointment လုပ်ရမယ်ဟု သိရပါသည်။ ဤနေရာတွင် ပြောရမည်ဆိုလျင်
(က) သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူက ဒီလောက် တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးကို တိတိတင်တင် အသိပေး ပြောကြားပြီး ဆက်လက် မတန်းစီရန် တိကျသော သတင်းအချက်များကို ပေးသင့်ပါသည်။
(ခ) ရေးသားထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အယ်စီဒီမှ ပြသနေသည်များကို ပြောင်းလဲသွားလျင် update လုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဂ) ကျွန်တော် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနဲ့ သွားတွေ့ပြီး ကျွန်တော့် အကြံပြုချက်ကိုပြောသောအခါ “ခင်ဗျား အကြံပြုမနေပါနဲ့..ကျွန်တော်တို့ သိပြီးသားပါ..ကျွန်တော်တို့မှာလည်း လုပ်စရာ အများကြီးရှိတယ်ဗျ” ဟုသာ ပြောကြားပါသည်။
သံရုံးဝန်ထမ်းများလည်း တစ်နေကုန် မအားလပ်ဘဲ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်ကို နားလည်ပါသည်။ လူ မလောက်လျင် စာရင်းရှိပြီး လစာယူပြီးအလုပ် မလုပ်ကြသော လူများနေရာတွင် အခြားလူများဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
(ဃ) ကျွန်တော်တို့ သံရုံးကို လာရောက်ကြသူများမှာ လုပ်ငန်းခွင်မှ နေ၍ ခွင့်ယူလာကြသူများဖြစ်ပါသည်။
(င) ကျွန်တော် မလာခင် ဖုန်းဆက်မေးကြည့်တာကို ဖုန်းဖြေကြားသူက သတင်းအချက်အလက်အမှန်ကို ဖြေကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသတင်းအချက်အလက်သစ်များကို သံရုံးမှတာဝန်ရှိသူများမှ ဖုန်းဖြေ ကြားသူထံ ပြောင်းလဲမှုများကို အသိပေးပြောကြားထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(စ) ပြီးတော့ သံရုံးတွင် ဖုန်းတစ်လုံးသာ ရှိသည်ဟု သံရုံးဝန်ထမ်းက ပြောကြားပါသည်။ လိုင်းခွဲများ ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဆ) မြန်မာပြည်သည် ယခုအချိန် နိုင်ငံခြားသားများ စိတ်ဝင်စားပြီး ခရီးသွားရောက်ရန် စိုင်းပြင်းနေကြချိန်တွင် သံရုံး၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ ပေးအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များ ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀. မြန်မာ ပတ်(စ)ပို့ စာအုပ်အသစ်တွင်လည်း နိုင်ငံတကာ (အာစီယံ) အဆင့်မီ အနည်းဆုံး ၅ နှစ် ထားရှိသင့်ပါသည်။
၁၁. စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ စသည့် နိုင်ငံများရှိ မြန်မာသံရုံးများသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများထံမှ အခွန်တောင်းခြင်းတွင် မကဘဲ ထိုနိုင်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မိမိတို့နိုင်ငံသားများ၏ အထွေအထွေအရေး ကိစ္စရပ်များကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချက်သည် အဆင့်အတန်းရှိသော၊ မိမိနိုင်ငံသားများကို တန်ဖိုး ထားသော နိုင်ငံကြီးများ ပြုကျင့်ကြသော အလေ့အထကောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
၁၂. ယခုကဲ့သို့ မိဝေး၊ ဖဝေး၊ မိသားစုနှင့် ဝေး၊ တိုင်းခြား ပြည်ခြားတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရသော နိုင်ငံသားများ၏ ချွေးနဲစာကို မရ မက အတင်းယူနေသော နိုင်ငံအစိုးရမျိုးကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကျွန်တော် သိရသလောက် မတွေ့ရှိဘူးပါ။
၁၃. စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးမှ ရရှိသော ၀င်ငွေအကြမ်းဖျင်းကို တွက်ချက်ပြချင်ပါသည်။
EP နှင့် PR ကို တစ်လ စင်ကာပူဒေါ်လာ (၁၂၀)
S Pass ကို တစ်လ စင်ကာပူဒေါ်လာ (၈၀)
WP ကို တစ်လ စင်ကာပူဒေါ်လာ (၄၀)
Nursing ၊ Maid နှင့် မိဘနဲ့ အတူပါလာပြီး ကျောင်းတက်နေသော PR ကလေးများပင် အသက် (၁၈)နှစ်ကျော်လျှင် တောင်းပါသည်။
ပျမ်းမျှ တစ်ဦးလျင် တစ်လကို စင်ကာပူ ဒေါ်လာ (၆၀) ပေးဆောင်ရသည်ဆိုပါစို့..။
၂၀၀၇ ခုနှစ် Straits Times သတင်းစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ စင်ကာပူရောက် မြန်မာဦးရေ ၁ သိန်း ရှိသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ယခုအချိန်ဆိုလျင် အကြမ်းဖျင်း ၂ သိန်း ၀န်းကျင်ခန့် ရှိပါသည်။
စင်ကာပူရှိ မြန်မာ ၁ သိန်း အလုပ် လုပ်နေပြီး အခွန် ပေးဆောင်နေရသည် ဆိုလျင် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသည် တစ်လအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများထံမှ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆ သန်းရရှိနေပါသည်။ ထိုငွေများ ဘယ်သို့ရောက်သွား သနည်း..။
နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာထဲသို့ အမှန်တကယ်ရော ရောက်သွားပါသလား ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားစရာကောင်းပါသည်။
(မှတ်ချက်။ ။ မှားယွင်းနေသော အချက်အလက်များရှိပါကမည်သူမဆို ဝေဖန်အကြံပြု ပြင်ဆင်ပေးစေလိုပါသည်။)
ဟိန်းထိုက်ဈာန် (ခ) ကျော်ကျော်အောင် BE (Aeronautical)
မူရင်း – Facebook – စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ…
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:လူမှုရှုခင်း, ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ
23 Responses to စင်္ကာပူမြန်မာသံရုံးအကြောင်း သမ္မတထံ ပေးစာ – open letter
Aung Myint on March 10, 2012 at 1:49 pm
A Myanmar citizen living inaforeign country and working in there must pay tax until December 2011 which must be 10% of the citizen’s income until August 2011 and 2% of the income between September 2011 and December 2011.
A Myanmar embassy should haveaspecific telephone line shown on their websites for Myanmar tax payers. Myanmar citizens living in US have difficulties to get their passport renewed.
However please review my experience, I sent all completed documents and money order on Tuesday before Thanksgiving day which was on Thursday to Myanmar Embassy in Washington D.C and my passport was received on Tuesday after Thanksgiving day. It took only three business days.
IfaMyanmar embassy taxesaMyanmar citizen after December 2011, it breaks the law, call the ministry of foreign affairs in Yangon.
Aung Myint on March 10, 2012 at 1:55 pm
IfaMyanmar student studying inaforeign country. submit all school documents likeadiploma,astudent’s record like grades, andaletter from the school which the student is in. There is no tax. The student must pay the renewal fee and the expired passport fee oranew passport fee if the passport have less than six visa pages.
Law* on March 10, 2012 at 2:52 pm
Burmese nationalities mean Junta’s money making walking machines.
Junta’s law is :
Advice is to pray NLD win.
Aung Myint on March 10, 2012 at 2:21 pm
There is no tax payed byadependent. Here is an example ofahouse hold with four people,ahusband.awife and two children who are still going to school. The husband who isaretired dentist and the children do not need to pay it. The wife runsasushi restaurant pays the tax. After she paid the tax till December 2011. they all got their passport renewed.
If someone married toaforeigner. he or she would like to pay tax but the man working in Myanmar Embassy working in Washington D.C advised her to save some money paidadeposit $800 instead of paying tax $2000. $800 will return to her after she changes the immigration status like she becomesaUS citizen.
The people working in the Myanmar embassies should give youaright information. You should know who can give you the right ones.
than ngwey on March 10, 2012 at 2:38 pm
than shwe taughter takecare of singapore embassy right???????
maybe thats our the myanmar worker we pay tax money become for
another .oneset of dimond for her…… right .
ှSaw Htee on March 10, 2012 at 3:12 pm
ကျွန်တော်လေ့လာ ထားသလောက် ပြောပါရစေ။
မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့ ရဲ့၂၀၁၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂၁) ရက်နေ့ မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၇/၂၀၁၁ အရ ပြည်ပနေ နိုင်ငံသားများက နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပေးဆောင်ရသည့် ၀င်ငွေခွန်ကို ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုတဲ့ အမိန့်က ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့ မှ အကျိုးသက်ရောက်လို့အဲဒီမတိုင်ခင်ကာလ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့အထိ အခွန်ပေးနေရတာပါ။
မြန်မာ ပတ်(စ)ပို့ စာအုပ်အသစ်တွင်လည်း နိုင်ငံတကာ (အာစီယံ) အဆင့်မီ အနည်းဆုံး (၅) နှစ် ထားရှိ သင့်ပါသည် ဆိုတာကိုလည်း ထောက်ခံပါသည်။
သံရုံးများက ဖုန်းမကိုင်တာတော့ မဟုတ်။ ဖုန်းလိုင်းခွဲတွေ ရှိနေသော်လည်း မိမိဆက်သွယ်လို တဲ့ ဌာနကို လိုသလို ရွေးချယ် ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ ပါတဲ့ တယ်လီဖုန်းစနစ် မတပ်ဆင်ထား နိုင်တဲ့ အတွက် အော်ပရေတာက ဖုန်းတစ်လုံးကို ဖြေနေစဉ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ခေါ်လိုက်ပါက ဖုန်းမကိုင်တဲ့ သဘောရောက်သွားခြင်း သာဖြစ်မယ်ထင်ပါသည်။ အဲဒီမှာ ကိုယ်သိချင်တာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ အဆင်ပြေဖို့အတွက် သံရုံးက လူများအား ပေါင်းသင်းထားမှ ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာသည်။ လူများများ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ သံရုံးတိုင်းမှာရှိတဲ့ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဖုန်းစနစ် များအား အသစ်ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်စေလိုပါသည်။
သံရုံးများဟာ အမိမြေ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့တန်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသားများ သိရှိလိုသည့် အချက်များ၊ ၄င်းတို့ အတွက် အဆင်ပြေစေနိုင်ရန် သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို မြန်မြန် ထက်ထက်နဲ့ အချိန်မရွေး ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့သံရုံးဝက်ဆိုဒ်များမှာ ပုံမှန်ထည့်သွင်းပြီး အပြောင်းအလဲ များကိုလည်း ပြောင်းလဲတိုင်း သံရုံးဝက်ဆိုဒ် များမှာလဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသင့်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက် လည်ပတ်မည့်သူများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ သိလိုသောအချက်များ အားလည်း ၄င်းတို့ဒေသဘာသာစကားဖြင့် လည်းကောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လည်းကောင်း သံရုံးဝက်ဆိုဒ် များမှာ ရှိထားသင့်ပါသည်။
ဒါတွေလုပ်ဖို့မလုပ်တတ်ရင်လဲ လုပ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး လုပ်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ကလျှို့ဝှက်တွေ အင်တာနက်ပေါ်တောင် ဖေါဖေါသီသီ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ရောက်နေတာဘဲ ခက်ခဲမယ်လို့မထင်ပါ။
ရှင်မိ on March 10, 2012 at 3:22 pm
မောင်ရင် သမတဆီရေးစာ ဖတ်ရလို့ ကိုယ်တွေ့ပြောရရင် မလေးသံရုံးကလဲ မြန်မာတွေကို ဆက်ဆံတာက ထောင်ပိုင်တွေက ထောင်သားတွေကို ဆက်ဆံသလိုပါဘဲ။ အောက်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းပြီး လူနာမည်တွေကို တရားခံနာမည်ခေါ်သလို ခေါ်တယ်။လုံးဝ ယဉ်ကျေးမှု မရှိဘူး။
ဥရောပခရီးသည်တစ်ဦးက ပြောဘူးတယ် ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရိုင်းစိုင်းဆုံးပါဘဲတဲ့။
ကေအယ်က ထိုင်းသံရုံးကို ဗီဇာတိုးတော့ သိပ်ကို ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေဆို တန်းမစီခိုင်းဘဲ တခါတည်း ၀င်ခွင့်ပြုတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားကို လူလို မဆက်ဆံတာတော့ ဗမာသံရုံးတွေဘဲရှိတယ်။
ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံးက သံဃာတော်တွေကို သက်တမ်းတိုး၊ စာအုပ်လဲတာကအစ ဘတ်(၄၀၀၀)တောင်းတာတွေ့တယ်။ပြီးတော့ သံဃာတွေကို ဆူပူငေါက်ငန်းနေတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
အရိုင်းအစိုင်း စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့လက်ဝေခံတွေ ပီသလှပါပေတယ်။
အောင်စိတ်မာန် on March 10, 2012 at 3:25 pm
မြန်မာသံရုံးတွေ ရိုင်းစိုင်းတာတွေ ပြုပြင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Aung Myint on March 11, 2012 at 7:47 pm
I contacted Myanmar Embassy in Washington D.C in November 2011 and called them more than three times. There are many automated options. The hold time was more than 30 minutes. The woman answering it was looked like an Indian. The way she answered was really not ok. I asked her to transfer me to the one who was the responsible for tax andarenewed passport. I was very upset on the first day when I gotahold of her as I was on the phone for more than 30 minutes and I was rude with her. She did not transfer me. After I gotahold of the man who was Sai Aung Mon ext. 216 and worked for tax andarenewed passport, he resolved mine and was very nice.
Please try to be nice with them when you contact them. let them know what problem you have and I hope you will get helped.
sai on March 16, 2012 at 8:18 am
dear,u aung myint…
his name is not sai aung mon,its sai mong naung and he is my brother.
i thank u ,on behalf of my brother.
super on March 10, 2012 at 3:52 pm
သမ္မတက ပြောတယ် သူမသိဘူးတဲ့။ သိလဲမသိချင်ဘူးတဲ့။ ဘာမှလာ၇ှင်းပြမနေနဲ့။ ။
မြန်မာပြည်သား on March 10, 2012 at 5:06 pm
၂၀၁၂ဇန်နဝါရီလကစပြီး အခွန်ပေးဆောင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာက၊ အရင့်အရင်လတွေ အတွက်ကော မဆောင်ရတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား။ အဲလိုဆိုရင်၊ သိပ်သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ စင်ကာပူမြန်မာသံရုံးက ဝန်ထမ်းအစဉ်အဆက်ကတော့ ငါတို့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ တော်တော်ထောကြမှာပဲကွာ။ သူတို့ဆီကနေ ပြန်ရအောင်ယူရမယ်ကွ…
Than Win on March 10, 2012 at 6:13 pm
Government like parent will not treat his People in this way. It is time for value change and mind set change. Myanmar new government must look into this matter seriously to serve his People better . If not someone will serve them better.
Thandar on March 10, 2012 at 6:17 pm
I had studied my Master in Bangkok from Dec 2009 to Dec 2010 and continued my Master in Australia from Jan 2011 to Dec 2011. When I renewed my PP at MOHA Yangon in Dec 2011, I produced letters from the uni but was refused to recognize those letters and I had paid about Ks.450,000 to IRD to get Form 17 . My uni is in Sydney and quite far to Canberra to getaletter from our embassy that I had studied in Aus. So, I had paid the tax
Ks.450,000 without being working there forasingle hour.
Aung Myint on March 11, 2012 at 8:06 pm
The school you are attending or you graduated must producearecommendation letter which states that you areafull time student or you may also submitacopy of your diploma andasealed transcripts. However we must payapassport renewal fee $100 andapenalty of $16.7/ year for an expired passport. If the expiration date is more than three years,apenalty of $133 isaplus. If you paidamount of Myanmar Kyats for D Form, it will be returned to you when you go back to Myanmar.
joe sitt on March 10, 2012 at 6:32 pm
Please visit to Singapore Embassy Website. Most of information what we want to know can be found at there. Not so bad. It seems to be on right track. But It still needs to keep on going .
Reader on March 10, 2012 at 6:40 pm
မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတာဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူး။ ဘယ်ကောင်မှလဲတန်ဖိုးမထားဘူး။ လူချင်းတူတူမြန်မာကနိုင်ငံသားတန်ဖိုးမရှိတာ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားခံလိုက်။ အဲဒါလက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေပဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်နေသရွေ့တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ အဲဒါကိုပြောင်းလိုက်..အိုကေပဲ။
hai hai on March 10, 2012 at 7:06 pm
Everything is correct but i want to putin something one time iwent to embassy so many people myanmar man same like u he say somany people need to help this section i here because besid him embassy First Secretary what he say very bad toughing and wend to bid him that time never cover visar section forenger people also have all look up him myanmar officer is likethat i saw i have that is i can tell u .
thanhtike on March 11, 2012 at 11:31 am
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပါ၊ သူမြန်မာပြည်မှာရှိစဉ်အချိန်တုန်းက သူ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါ သူတို့တွေဟာမြန်မာပြည်မှာရှိနေစဉ်အချိန်မှာ ဘယ်အလုပ်ဆီကမှ လာဘ်ယူတဲ့အလုပ်မျိုး မလုပ်ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တစ်ခုခုပြဿနာ တက်လို့ရှိရင် ကိုယ့်အလှည့်နဲ့ထွက်ရမယ့် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ပျက်သွားမှာစိုးလို့တဲ့။သူတို့နိုင်ငံခြား(၂)နှစ်(၃)နှစ်လောက် သွားရရင် သိန်း(၂၀၀)(၃၀၀)လောက်က အနည်းလေးဆိုပဲ။
mgoogyaw on March 11, 2012 at 8:10 pm
So. What are we? We born as Burmese,are, insult,look down,and many ways ,we have to suffered.The Burmese Embassies in Abroad,treats,very Badly,upon ,it own people,while, other, Whole World ,Embassies,treats nice upon their citizen. We, Burmese in Abroad still treates badly, by our same Embassies people, also, as the concerning countrires Authourities,also , treats Badly, so , we have suffered in both ways. Aw…. Pitiful to become A Burmese citizen in outside of Burma.
ထိန်လင်းလေး on March 11, 2012 at 8:44 pm
သမတ သိန်းစိန်က တောထဲက ကလေးတွေ Lap Top မကိုင်နိုင်တာကို သနားနေတာ … မင်း ကိစ္စ စိတ်မ၀င်စားဘူး
win on March 12, 2012 at 9:09 pm
မလေးရှားမှာဒီလို့ပါဘဲ အတူနဲ့ အနူနူဘဲ အရင်နဲ့ 
me me on March 15, 2012 at 3:40 pm
Any embassy officer u know u/your family came singapore hospital to any hospital case the family can stay inside singapore embassy,expt:pation.